Kidizoom DX2 by VTech, saacadda caqliga leh ee carruurta | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Ciyaaraha IPhone, dhowr
Maanta waxaan falanqeyneynaa qalab aad u qaas ah: saacad caqli-gal ah oo loogu talagalay carruurta. Kidizoom DX2 ee ka socda VTech waa mid xiiso leh, waxay ka caawisaa carruurta inay wax bartaan sidoo kale waalidiintu aad ayey ula qabsan karaan.
Saacaddan casriga ahi kama iman Apple, xitaa kuma xirna iPhone-keena, laakiin si gaar ah ayaa loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta. VTech wuxuu ku guuleystay qalab adag, baashaal weyn oo loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta, taas oo sidoo kale baran doonta waxyaabo ay ka mid yihiin ogaanshaha waqtiga analoogga waxayna ku dhiirrigelin doontaa inay kordhiyaan jimicsigooda, iyo in aan si farxad leh ula yaabay marka la eego hawlgalkeeda, aniga oo aad u dareen badan oo leh jawaabta taabashada runta ah ee shaashadda.
2 Ciyaaraha, qalabka iyo barashada
3 Walwal kama qabo waalidiinta
Smartwatch-ka ayaa ka samaysan caag, aad u fudud (oo kaliya 100 garaam) aadna uga jilicsan birta ama muraayadda, sidaa darteed aad ayey ugu habboon tahay cunugga inuu xidho. Waxay leedahay shaashad taabasho oo cabirkeedu yahay 1,44 inji oo midabkeedu dhan yahay, oo waxay ku shaqeysaa batari isku dhafan (oo aan la beddeli karin) kaas oo dib loogu buuxinayo iyadoo la adeegsanayo isku xira microUSB oo ku yaal dhinaca iyo fiilada lagu dhex daray sanduuqa. Batarigiisu wuxuu leeyahay ismaamul isweydaarsi ah oo ku kala duwanaan doona hadba waqtiga la isticmaalayo, laga bilaabo dhowr maalmood haddii isticmaalkiisu aad u xoog badan yahay, illaa toddobaad leh adeegsi joogto ah. Beddelka gadaasha saacadda ayaa u oggolaaneysa in saacadda gebi ahaanba la damiyo marka uusan xirneyn muddo dheer.
Waxay leedahay laba kamaradood, mid ku yaal dhinaca hore, si sawirro looga qaado, iyo mid kale xagga hore. Waxay u oggolaaneysaa qabashada sawirrada xallinta 640 × 480 iyo fiidiyowyada illaa 60 ilbiriqsi oo dherer ah oo xallinaya 320 × 240. Thanks to 256MB ee xasuusta gudaha, wax kasta oo aad qabato waxaa lagu keydin doonaa saacadda lafteeda, iyadoo ay suuragal tahay in laga soo dejiyo kombiyuutarka adoo adeegsanaya fiilada microUSB. Awoodda keydinta waxay ku saabsan tahay sawirrada 1500 iyo 10 daqiiqo oo fiidiyoow ah oo qaraar buuxa leh.
Waxay ku leedahay badhan dhinaca hagitaanka menu, iyo mid kale oo dhinaca ka soo horjeedka ah oo ku saabsan soo qabashada sawirrada iyo fiidyowyada. Isla dhinacaas wuxuu ku leeyahay isku xiraha microUSB, oo leh dabool caag ah oo ka hortagaya soo gelida siigada iyo wasakhda kale. VTech DX2 ma aha mid biyuhu xireen, waxay iska caabbinayaan buufinnada, laakiin waa in aan lagu quusin biyo ama qasabad la hoos dhigin. Waa tan kaliya "laakiin" ee aan ku dhejin karo saacaddan, oo qeexitaannada iyo tayada dhismahoodu u muuqdaan kuwo ku habboon kuwa yaryar ee guriga ku jira.
Waxay leedahay xargo caadi ah si ay u qabato curcurka. Suunka waxaa loo cabiraa curcuraha yaryar, wuxuuna leeyahay godad hagaajin ku filan si ilaa 10-12 sano ay u isticmaali karaan dhib la'aan. Waa suun taabasho aad u jilicsan leh, aadna ugu habboon in la xidho, kaas oo fudaydkiisu sidoo kale wax ku darsado. Habka xiritaanka suunku waa aamin wuxuuna ka hortagaa dhibcaha ama khasaaraha shilalka.
Ciyaaraha, qalabka iyo barashada
Saacaddu uma baahna wax qaabeyn ah si ay u bilaabi karto isticmaalkeeda. Marka taariikhda iyo waqtiga la muujiyo, waxa ku jira oo dhan waa la isticmaali karaa. Ciyaaraha ayaa loo habeeyay si loogu isticmaalo is-dhexgal taabasho oo aad u fudud, oo ka bilaabma xujooyinka ilaa mazes. Kuwa yar yar uma baahna in ka badan dhowr ilbidhiqsi si ay u ogaadaan sida ay u shaqeeyaan, waana ciyaaro aad u gaagaaban oo iyagoo kaashanaya dhawaaqyada ay soo saaraan u oggolaan doona inay helaan waqti xiiso leh. Waxa kale oo jira ciyaaro waxbarasho sida kan ka caawiya carruurta inay ogaadaan saacadaha saacadda gacanta.
Xitaa way leedahay ciyaaraha xaqiiqda ah ee la kordhiyay, taas oo ka dhigaysa cunuga inuu dhaqaaqo si uu wuxuush uga soo muuqdo shaashadda adduunka dhabta ah, mahadnaqa kamaradda hore, oo ay tahay inay ku baabi'iyaan aragti. Inta badan ee aad dhaqaajiso wuxuush badan ayaa muuqan doona. Dhiirrigelinta dhaqdhaqaaqa jireed waa muuqaal muhiim ah oo ka mid ah waxyaabaha ku jira Kidizoom DX2., oo leh codsiyo badan oo cunugga ku dhiirrigeliya inuu boodo, ordo, socdo ... si loo gaaro himilooyinkooda, taas oo ay ugu wacan tahay falanqaynta dhaqdhaqaaqa ee ay saacaddu ku samaysay iyada oo loo marayo xawaare isku-dhafan.
Dabcan saacaddu waa saacad, oo sida oo kale dilalku waa qayb muhiim ah. Waxaad haysaa dhowr wicitaan oo aad si fudud u beddeli karto, iyo sidoo kale inaad kala bedbeddeleyso saacadaha analogga iyo kuwa dhijitaalka ah, iyo sidoo kale aaladaha kale ee caadiga ah ee saacadda casriga ah, sida alaarmiga, saacadda saacadda, jadwalka, saacadda, iwm. Waxaas oo dhan oo leh interface aad u macquul ah oo carruurtu si fiican u qabtaan.
Kaamirooyinka ayaa ah xiddigga weyn ee saacaddan casriga ah. Carruurtu waxay awoodi doonaan inay sawirro iska qaadaan ama sawirrada saaxiibadood ama hareerahooda, oo ku beddel iyaga walxaha xiisaha leh iyo looxyada, oo markaa lagala soo bixi karo kombiyuutarka ama loo isticmaali karo sida waraaqda waraaqaha loogu talagalay saacadda. Waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu qosolka badan ee soo jiita kuwa yaryar inta badan daawashada VTech. Sidoo kale fiidiyowyo ama xitaa qoraallo cod ah, oo markaa laga ciyaari karo aaladda lafteeda.
Haddii waxyaalahan oo dhami aysan ku filnayn, websaydhka VTech waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka 'Explor @ park application'isku xirka) ee labada Windows iyo Mac, oo ay weheliso soo degsashada cusbooneysiinta saacadeena waxaad kala soo bixi kartaa ciyaaro aan tiro lahayn, mawduucyo iyo waxyaabo kale oo gebi ahaanba bilaash ah oo ku rakib saacadda si nuxurkeedu u kala duwanaado. Iyagu waa codsiyo yar yar iyo faylal si dhib yar u qaata boos, markaa dhib kuma lahaan doontid inaad soo dejiso dhammaan waxyaabaha aad rabto. Si aad u soo degsato sawirrada iyo fiidiyowyada kombiyuutarkaaga, waa inaad kaliya isku xirtaa waxaana loo ogaan doonaa inuu yahay keyd dibadda ah oo aad ka jiidi karto waxyaabaha ku jira darawalkaaga adag, ama xitaa tirtiri karto.
Walwal kama qabo waalidiinta
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee saacadda ayaa ah in dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay loogu talagalay carruurta yaryar ee guriga ku jirta, mana jirto suurtagalnimada helitaanka waxyaabo kale oo aan habbooneyn. Saacadda waxaa ka maqan nooc kasta oo isku xirnaanta, midkoodna WiFi ama Bluetooth midna, sidaa darteed ma jiraan wax khatar ah oo cunugga ku soo dejisan karo waxyaabo aan habboonayn, ama lacag ku qarashgareyn karo kormeerkeenna. Sidoo kale waa wax aan macquul aheyn qof inuu la socdo saacadda. Waxaan aad u daganaan karnaa in kan yar uu isticmaalo, wax aad muhiim u ah markaan kahadalno caruurta noocaas ah.
Smartwatch-ka 'Kidizoom DX2 smartwatch' oo ka socda VTech ayaa ah toy ku habboon kuwa yaryar ee guriga ku jira. Waxaa u sabab ah agabyada iyo tayada dhismaha, softiweerkka la fahmi karo iyo shaashadda taabashada ee aadka looga jawaabo, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, waxyaabaha ay ka kooban tahay carruurta 5 ilaa 12 sano jir ah iyo noocyo aad u tiro badan oo si bilaash ah looga soo dejisan karo . Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan (casaan, casaan, buluug, cagaar, guduud iyo midho), waxaa lagu qiimeeyaa € 59,99 on Amazon (isku xirka).
Iftiin iyo raaxo
Taabo shaashad jawaab aad u fiican
Waxyaabo aad u kala duwan oo ku habboon carruurta
Ku dhiirigeli jimicsiga jirka
Aan biyuhu ahayn
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kidizoom DX2 by VTech, saacadda caqliga leh ee carruurta
Ma lahan waxa ugu muhiimsan waalidiinta: Wac oo soo hel meesha, wixii aan ka akhriyey, wax kale ma aha ee waa konsole yar yar oo raaxo leh.
Jawaab Alvaro J.